Douglas A_20 sano 2 8 bilood ka hor #809
Waan soo degsaday Douglas A_20 Havoc kadib markii aan jaray dhammaan astaamihiisii ​​nabadgeliyada kombuyuutarkeyga (Norton iyo Koontada Koontaroolka Isticmaalaha). Soo dejinta iyo Rakibaadda halka lagu guuleysto. Ka dib markii la rakibo FSX Waan ka heli kari waayay daaqada Xareed ee Diyaaradda Diyaaradda. Waan isticmaalayaa FSX Kordhinta 2013-Nooca 2.9 si loo bilaabo FSX oo waxaan kaloo isku dayay inaan bilaabo FSX adigoon isticmaalin Booster 2013. Waxaan sidoo kale isku dayay inaan dib u bilaabo Kadib waxaan isku dayay dib-u-ridaan FSX Daabacaha Duulista Duulimaadka Duullimaadka 'DVD Disk' adigoo adeegsanaya muuqaalka Dayactirka. Waxaan hayaa FSX ku rakiban D-my: disk disk not the C: disk disk-ga gudaha faylasha Barnaamijka (x86) / Ciyaaraha Microsoft. Waxaan sidoo kale isku dayay dib-u-cusbooneysiin dhowr jeer aniga oo adeegsanaya Rakibaadda Tooska ah iyo Rakibaadda Macaamiisha. Wax aan sameeyo uma muuqdaan inay rabaan inay keenaan Douglas A_20 Havoc ee daaqadda Xulista Diyaaradda.
Xasuusta lagu rakibay (RAM): 16.0 GB (15.9 Isticmaala)
Nidaamka Nidaamka: 64-Nidaamka Nidaamka Nidaamka Hawleedka, X64-saldhigga ku salaysan
Tilmaameeyaasha Tilmaanta: NVIDIA GeForce GTX 970 iyo Intel (R) Sawirro 4600
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: papy68